Ukulungiswa kwangoko kusasa
Ubuhle bomfazi Iifake
Ngethuba lethu, amaninzi amabhinqa ayaphoqelelwa ukuba angenele kuphela kunye kunye nentsapho, kodwa nokuphandlekela imisebenzi, ukufundisisa kunye nokuhamba. Ubomi bethu bube bukhuni, ngoko kufuneka sizame ukwenza konke kwaye sidibanise, ngamanye amaxesha, izinto ezingahambelaniyo. Umzekelo, ukubonakala okubonakalayo kunye nokuntula okungapheliyo kokulala. Kwabaninzi, oku kuba yinkinga yangempela - ukungabi nako kokulala kokulala kuphazamisa imeko yesikhumba ngendlela engalungile, ubuhle kunye nolutsha luhamba ngokukhawuleza. Ukufihla umzila wokulala ubusuku, kufuneka nje wenze ukulungiswa kwentsasa yokusa.
Ngaphambi kokuba uqale ukuzinzela ubuhle, kufuneka uvelise isikhumba, uze uvuse. Kule nto kufuneka uhlambe. Khumbula indlela osebenzisa ngayo iswahlulo esahlukileyo ukuze ukhuphe ukukhathala kwaye ugxotha ukulala, ukuba le ndlela ilungele umzimba, iya kufumana kakuhle ubuso. Ngenye indlela ayilathanga ngqo imilambo enamandla yamanzi ngqo ebusweni, ngokutshintshwa kwamanzi abandayo kunye namanzi ashushu. Ekupheleni, hlamba ngamanzi abandayo. Oku kuya kunceda ama-pores ukuba anciphise, kwaye ukujikeleza kwegazi kufikelele.
Emva kokuhlamba, ezinye iinkqubo ziya kuba yimfuneko. Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe ngokukhenkcela isikhumba ngeqhwa. Ukwenza oku, kwifriji kufuneka uhlale ilungele iikhabhi ze-ice, ezenziwe kwi-decoction ye-chamomile okanye i-petals. Ngeqhwa elinjalo, unokusula ubuso bakho kwimigca yokusila. Le yinkqubo enomdla kakhulu eya kunceda ukulahla zonke iintlobo zempawu zokukhathala, nangona ungazange ulale ngalo lonke usuku.
Imeko ebalulekileyo, apho ulusu lugcina ukubonakala kwalo oluhle, kukuhlambulula nokutya. Ezi nkqubo zisebenza ngokukhethekileyo ebusuku xa silala. Ukuba awufumani ukulala ngokwaneleyo ebusuku, kuya kufuneka uthathe amanyathelo angxamisekileyo. Yenza imaski yokuhlambulula eya kunceda ukulahla amabala amnyama. Emva koko sebenzisa ukhilimu onomsoco, ubuninzi obususayo nge-napkin. Ngoko uya kukhohlisa ulusu, ngokukhawuleza uzalise zonke iinkqubo ezimele zenzeke ngexesha lokulala. Kodwa kukufanelekile ukukhumbula ukuba xa wenza konke oku rhoqo, akusayi kuba nempembelelo ephawulekayo - akukho mask esigxina angakwazi ukujamelana nokungahlali kokulala, iimpawu zalo ziya kubonakala.
Ukutshiza kwasekuseni emva kobusuku bokulala buyinkimbinkimbi. Okokuqala, awukwazi ukuhamba ngokugqama kwemibala - yonke imibala ecebileyo iya kugxininisa kuphela ukukhathala. Siza kudala ukwenza ukwakheka kwemvelo. Okwesibini, akusayi kuba nexesha elide kakhulu elileleyo.
Okokuqala, zifihla imibuthano emnyama kunye nokuvuvukala phantsi kwamehlo ngoncedo lwe-corrector. Kwakhona kunceda ukugubungela amabala e-pigment kunye nama-pimples. Zonke iiphene zesikhumba kufuneka zibe ngokungaqhelekanga ngokusemandleni.
Emva koko kusetyenziswe isiseko siseko. Ngaphezu koko, ukhilimu ungcono ukhethe i-tone lighter kuneyona odla ngokuyisebenzisa - ibukeka ibangela ubuso bubutsha kwaye bubuqhe. Emva koko, ubuso bunokuba ngumgubo omncinci, uphumelele ngokugqithiseleyo ngeengqungquthela ezibonisa ukukhanya-oku kuya kukhanyisa isikhumba.
Ukugqithisa kweempawu zezemvelo, ezifanelekileyo kakhulu kumbala wesikhumba sakho, uya kwenza. Kodwa imibala ekhanyayo kufuneka igwenywe.
Iimpawu zilungele ukhethe amathoni e-pastel, into eninzi egcweleyo ingasetyenziswa kwikona langaphandle liso. Inki ibomvu okanye ibomnyama, njengoko i-eyelashes enhle izakuqwalasela amehlo, ukufihla ezinye iingxaki. Ukuba usebenzisa i-podvodku, ngoko endaweni yomnyama kukulungele ukhetho oluhlaza, oluhlaza okwesibhakabhaka okanye oluhlaza.
Kodwa i-lipstick ibhetele ukugatya ngokupheleleyo, kungcono ukhethe i-gloss shadow shade yemvelo. Ngaloo ndlela, uya kufumana ukulungiswa kokusa kusasa okuza kwenza ukuba uhlambuluke ngakumbi kunamaphi amathoni anomlilo kunye nemigca ebukhali ekwenzeni.
Ukusasa kweMasa kunokusinceda singaboni kakuhle, kungakhathaliseki ukuba kuzaliswe njani ukuhlwa ebusuku. Ngokunceda, unokwenza umfanekiso ochanekileyo, ugxininise ukufaneleka kwemvelo ebusweni, ugxininise iinkcukacha ezicacileyo kwaye ubeke amehlo akho kwiintsilelo ezincinane. Into ephambili akuyi kuzama ukugubungela umbala weempawu okanye iimvalo phantsi kwamehlo, kwaye ungazami ukubheka iminyaka engama-10 emncinci kunako.
Iilenze ezimnandi zoNyaka omtsha 2016, umfanekiso
Indlela yokucoca iilebhu ngekhofi: iklasi yeklasi yokuqala
Iimpawu zokufumba xa ugqoka iiglasi
Indlela yokwenza i-makeup enhle kwi-prom
Unokukhetha njani iibrashi ezenziwe kakuhle?
I-Stylish nefanelekileyo: izizathu ezintathu zokukhetha iimveliso zobuhle MAC x Min Liu
Iimfono - izifundo zokuzenza, ukulungiselela imini nobusuku
I-Bulgarian pie kunye noshizi
Iiprotheyini zokutya kwiZondlo zokulahlekelwa isisindo - Iingcebiso ze-Dietician
Ngaba kunokwenzeka ukuthanda ezimbini ngeyodwa?
Isaladi yezithelo kwiinanpha
Kungcono njani ukusebenza kumfazi?
Yinto ephazamisayo! UMikhail Teryokhin uza kubuya eXenia Borodina kwakhona
Kuphi ukuqinisa nokuphucula izipikili zakho?
I-anti-cellulite oil massage
Imiqulu ye-trout ngeeshizi
Izifo zesikhumba ebusweni
Impembelelo yoxinzelelo kumzimba womntu
Ukutya kunengqiqo kunye nokulinganisela.
IHoroscope ngoFebhuwari 2018 - I-Cancer yomntu - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Okroshka kwi-ukhilimu omuncu
Kuphi ukufumana indoda enhle
Ukusebenza okusebenzayo nge-barbell: inzima kumzimba wonke